सूर्य कहाँ उगन्छ? उत्तर तपाईंले आशा गर्नुभएन | नेटवर्क मौसम विज्ञान
पक्कै पनि धेरै पटक तपाईं आफैलाई अभिविन्यास गर्न चाहानुहुन्छ र हेरेको छ जहाँ घाम लाग्छ। जब तपाईं बच्चा हुनुहुन्थ्यो तपाईलाई सँधै भनिएको छ सूर्य पूर्वमा उदाउँछ र पश्चिममा अस्ताउँछ। साथै, त्यहाँ पश्‍चिमी चलचित्रहरूमा सँधै केहि संकेतहरू छन्। क्षितिज रेखामा खस्ने विशाल सूर्यसँग यो विशिष्ट सुन्तला सूर्यास्त सूर्यास्तको विशेषता हो। यद्यपि, सूर्योदय र सूर्यास्त तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। सूर्य वास्तवमा कहाँ उदय हुन्छ?
यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई यसको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउन जाँदैछौं र तपाईं हाम्रो सबैभन्दा ठूलो ताराद्वारा निर्देशित भएर आफैंलाई आफैंलाई राम्रोसँग राख्नको लागि सिकाउन सक्षम हुनुहुनेछ। के तपाई यस विषयमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ? सबै पत्ता लगाउन को लागी पढ्नुहोस्।
1 पुरातन सभ्यताहरूमा सूर्य
2 मुख्य अंकहरू
3 सूर्य वास्तवमा कहाँ उदय हुन्छ
4 विषुव र solstices को महत्त्व
पुरातन सभ्यताहरूमा सूर्य
हाम्रो महान स्टार सौर्य प्रणाली यो ब्रह्मांड मा स्थिर छ। यद्यपि स्थलीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो त्यो हो जो अघि बढिरहेको छ, दिनभरि, यसले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दछ। कुनै वस्तुको आवागमन पर्यवेक्षकको सम्मानका साथ हुन्छ। यस कारणले गर्दा, प्राचीन सभ्यता देखि यो सोच्यो कि यो सूर्य थियो जुन पृथ्वीमा सरेको थियो।
त्यहाँ धेरै सभ्यताहरू छन् जुन प्राचीन कालदेखि नै प्रकृतिका तत्त्वहरूलाई विशेष गुट प्रदान गरिएको छ। ती मध्ये धेरैमा, सूर्य सबैको सब भन्दा प्रशंसित तत्व थियो, किनभने यो एक हो जसले हाम्रो जमिनलाई उज्यालो पार्छ र बालीनालीलाई प्रकाश दिन्छ। तिनीहरूको चालहरूको अध्ययनले प्राचीन घडीहरू सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍यायो जुन दिनको अन्त्यमा घण्टा आकाशको सूर्यको स्थितिमा आधारित थियो।
यसरी सूर्यको स्थिति र दिनहरूको व्यवहारको अनुसन्धान गरियो। आजकल, हामीलाई थाहा छ दिनको उज्यालो घण्टाको संख्या जुन हामीसँग मौसममा भिन्न हुन्छ। यो कारणले हो पृथ्वीको परिक्रमण, अनुवाद र पोषणको आन्दोलन। यसको अतिरिक्त, तापक्रम र चिसोमा हामीलाई वास्तवमै कुन कुराले असर गर्छ झुकाव भनेको सूर्यको किरणहरूले पृथ्वीको सतहमा प्रहार गर्दछ, पृथ्वी र नक्षत्रबीचको दूरीमा होइन।
यसमा वैज्ञानिकहरू जहिले पनि अस्थिर नै रहन्छन्, जबसम्म यो पत्ता लागेन कि यो पृथ्वी थियो जुन सूर्यमा चल्दै थियो। तर सूर्य कहाँ उदाउँदछ र कहाँ खडा हुन्छ? पर्यवेक्षकको स्थितिको आधारमा, यो परिवर्तन हुन सक्छ वा यो हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्न र उन्मुखीकरण गर्न एक अचूक विकल्प हो?
अँध्यारो जहिले पनि दुष्ट र नकारात्मक व्यवहारसँग सम्बन्धित छ। यसै कारण सूर्यको अध्ययन प्राचीन सभ्यतादेखि नै गरिएको थियो। तिनीहरू जहिले पनि सोच्दछन् कि सूर्य कहाँबाट उगन्छ। यद्यपि यो तार्किक देखिन्छ, यो त्यस्तो छैन।
यो जहाँ फंक्शन आउँछ मुख्य बिन्दुहरू। यो एक सन्दर्भ प्रणाली हो जसले हामीलाई नक्शामा आफैलाई मार्गनिर्देशन गर्न मद्दत गर्दछ र कसरी सबै समयको लागि अभिमुखिक हुन्छ भन्ने जान्न। यी कार्डिनल पोइन्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापन गरिएको छ, जसले गर्दा सबैको लागि समान हो। यी विश्व मानकीकृत कार्डिनल पोइन्टहरू: उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिम।
सैद्धान्तिक रूपमा, सूर्य पूर्वमा उदाउँदछ र पश्चिममा अस्ताउँछ। हामीले लाखौं पटक लाखौं मानिसहरू यो कुरा सुनेका छौं। यदि हामी मैदानको बीचमा हरायौं भने निश्चय नै कसैले भनेको छ "सूर्य पूर्वमा उदय हुन्छ र पश्चिममा डगमगाउँछ।" यद्यपि यो जान्न त्यति सजिलो छैन, किनकि त्यहाँ केहि विसंगतहरू छन् जसले हामीलाई यस कथनमाथि श doubt्का गर्न दिन्छ।
सूर्य वास्तवमा कहाँ उदय हुन्छ
तपाईलाई थाहा छ सूर्य पूरबमा उदाउँदछ जुन यो सँधै भनिन्छ, तर यसले वर्षमा दुई पटक मात्र गर्दछ। यो किनभने पृथ्वीको झुकाव र यसको घुमाउने र अनुवादिक आन्दोलनले मुख्य बिन्दु बनाउँदछ जुनबाट सूर्य उदाउँदछ। तिनीहरू सँधै एकै ठाउँमा हुँदैनन्।
जब यो पश्चिममा राखिएको छ, यो पूर्वको साथ जस्तै हुनेछ। यो वर्षमा दुई पटक मात्र आउँदछ। यसले के गर्छ जुन हामीले माथि उल्लेख गरिसकेका छौं वर्षको throughoutतुहरूमा दिन को लम्बाइका बारे। झुकावमा निर्भर गर्दै जुन सूर्यको किरणहरू पृथ्वीको सतहमा पुग्छ र अनुवादित आन्दोलन जुन पृथ्वीको आफ्नो निश्चित कक्षाको केही क्षणमा छ, पूर्व कार्डिनल पोइन्टको पूर्वमा बढ्नेछ पूर्व वा होइन। यो मात्र वसन्त र गिरावट विषुववृत्तिको समयमा, एक वर्ष मा ठीक दुई पटक गर्दछ।
यी ती क्षणहरू हुन् जुन पृथ्वीलाई सूर्यको साथ यस्तो प .्क्तिबद्ध गरिएको छ कि यसको किरणहरू पूरै बाहिर निस्कन सक्छन् र पश्चिममा सेट हुन सक्छ।
विषुव र solstices को महत्त्व
सूर्योदय र सूर्यास्त जान्नको लागि, विषुववृत्त र संक्रान्ति धेरै महत्त्वपूर्ण तत्वहरू हुन्। वसन्त र गिरावट विषुववृत्तिको समयमा केवल दुई पलहरू छन् जसमा सूर्यको किरणहरू हामीलाई सकेसम्म लम्बवत रूपमा पुग्दछन् पृथ्वीको सतहमा। अर्कोतर्फ, सोल्टिसिसहरूमा हामी देख्न सक्छौं कि हामीसँग किरणहरू पहिले भन्दा झन् बढी झुकाव भएका छन्।
यी कारकहरू हामीले दिनभरि र ofतुहरूको अन्तमा हुने सूर्यको घण्टाको संख्या थाहा पाउन ध्यान दिईन्छ। यस कारणले गर्दा, मूल बिन्दुहरू ठीक गर्न र सूर्यको सम्बन्धमा पृथ्वीको स्थितिको बारेमा राम्ररी जान्न यसको अनुवादको कक्षामा सूर्य कहाँ उक्लिनेछ भन्ने कुरा जान्न महत्त्वपूर्ण छ।
विषुववस्तु बाहेकको बर्षको बाँकी समयमा सूर्य वसन्त र ग्रीष्म somewhatतुमा केही उत्तरको उत्तरतिर उगन्छ, जुन महिनाहरूमा चिसो गिरावट र जाडो एक सानो अधिक दक्षिण अनुहार बाहिर आउनेछ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, खगोल विज्ञानमा सबै कुरा कालो र सेतो हुँदैन। न त यो सही रूपमा भन्न सकिन्छ कि सूर्य पूर्वमा उगन्छ र यो पश्चिममा अस्ताउँछ। त्यसो भए यस क्षेत्रका बारे निर्देशन दिन हामी अन्य प्रकारका संकेतहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं जुन अझ भरपर्दो छ वा समय विषुववृत्तिको नजीकसम्म पर्खनु पर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » जहाँ घाम लाग्छ
आर्द्र subtropical जलवायु वा चिनियाँ मौसम